Qi moshi Porto Q 5k uphononongo lwebhetri engenazingcingo | Iindaba zeGajethi
Qi moshi Porto Q 5k uphononongo lwebhetri engenazingcingo
UJordi Gimenez | | Izixhobo, ngokubanzi, Reviews
Siqhubela phambili ngakumbi nangakumbi ngeebhetri eziphathwayo kunye I-moshi iyafana nomgangatho. Kule meko sinetafile ibhetri ephathekayo kunye neshaja ye-Qi engenazingcingo ethi isinike i-5.000 mAh ukuze sikwazi ukubiza i-smartphone yethu nokuba yeyiphi na indawo.
Le yibhetri eneempawu ezinenkqubo ekrelekrele ekwaziyo ukubona ukuba kukho into yangaphandle phakathi kwefowuni kunye nebhetri uqobo. Hayi, asithethi ngezikhuselo okanye izixhobo esinokuzisebenzisa kwisixhobo kuba le bhetri iyakwazi ukutshaja nasiphi na isixhobo ngesigqubuthelo ukuya kuthi ga kwi-5mm ubukhulu, sithetha ngenkqubo yokufumanisa intsimbi okanye izinto ezifanayo phakathi kwesixhobo sethu kwaye isiseko. Eli linqanaba elilunge kakhulu lokhuseleko lelo siqinisekisa ukhuseleko kuyo nayiphi na imeko yomthwalo.
1 Izixhobo zemveliso
2 Oko sikufumene ebhokisini
3 Ukucaciswa ngokubanzi kwemoshi Porto Q 5k
Kule meko, icandelo elichukumisa itafile okanye indawo apho sifuna ukusebenzisa isiseko sokutshaja linomsesane we-silicone othintela ukuba ungatyibiliki, kwinxalenye ephezulu sifumana le ndandatho ukwahlula isixhobo kwisiseko ngokwaso kwaye oku kunamathela ngaphandle kokutyibilika. Isitya sebhetri senziwe ngeplastiki kwaye kwinxalenye ephezulu sifumana ilaphu elingwevu elinikezela konke ukubamba okusemgangathweni.
Singatsho ukuba izixhobo ezisetyenziselwa ukwenziwa kwebhetri ephathekayo ekwasebenza kwitshaja yetafile okanye ezifanayo, zezi ilunge kakhulu. Yongeza ukuba ukufunyanwa kwezinto zangaphandle phakathi kwebhetri kunye nesixhobo esenza ukuba sikhuseleke ngokwenene.
Oko sikufumene ebhokisini
Kule bhokisi yemoshi Porto Q 5k siya kufumana iincwadana zokusebenza zebhetri ngokwayo kunye newaranti yemveliso, ukongeza kwibhetri ngokwayo esiyifumanayo i-USB C ukuya kwi-USB Intambo emalunga nama-50cm ubude esivumela ukuba sibize ibhetri uqobo okanye izixhobo ezisebenzisa le port inye.
Ukucaciswa ngokubanzi kwemoshi Porto Q 5k
IPorto Q 5K ine Umthamo we-5.000 mAhapho siya kuba nakho ukutshaja isixhobo sethu ngaphezulu kwamaxesha e-2 kwityala elinye lebhetri uqobo. Ke ukuthatha esi sisiseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo naphina apho silunge khona.
Singasebenzisa i-USB izibuko lebhetri ngokwayo ukutshaja i-smartphone engenayo iteknoloji yeQiokanye ubize isixhobo somhlobo wakho ngaxeshanye ngelixa i-iPhone yethu ihlawulisa. Ibhetri entsha yePorto Q 5K iQi iqinisekisiwe kwaye iyahambelana nazo zonke iintlobo zezixhobo ezixhasa le ntlawulo. Ikwanayo ne-LED ekrelekrele esixelela xa i-smartphone yethu ihlawulisa kwaye indawo ekuyo ilungile ukuze ingasikhathazi, kwaye ayinamandla kakhulu.
Eyona nto intle malunga nesi siseko sokutshaja siphathekayo kukuba iyasivumela ukuba sikhethe ukuyisebenzisa njengesiseko sokutshaja ekhaya, ke xa idityaniswe neadaptha eludongeni, isebenza njengesixhobo esiqhelekileyo sokutshaja ngaphandle kwamacingo, kunye nesongezelelo Uncedo lwamandla Yitshaja kwakhona ibhetri yakho ephathekayo ngaxeshanye xa siyifuna kude nekhaya okanye eofisini.
Le ibhetri yangaphandle enezakhono zokuba sisiseko esihlala siqhagamshelwe ekhaya, emsebenzini okanye naphi na apho sifuna ukutshajisa i-smartphone yethu. Zininzi iibhetri zangaphandle kwintengiso "ezifanayo" nale isuka kwimoshi ngokwemisebenzi, kodwa ngokwenyani umgangatho wezinto zokuvelisa kunye nezinto zangaphakathi yale bhetri yenza ukuba ibe yinto elungileyo kakhulu. Kwelinye icala, kufuneka sitsho ukuba ixabiso mhlawumbi liphezulu kakhulu ukuba lingaba "yibhetri eqinisekisiweyo yeQi" kodwa umgangatho wemveliso ngokubanzi yinto eyenza ukuba ibe phezulu kangaka.
IPorto Porto Q 5k
Ukulayisha umthamo naphi na
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Izixhobo » Qi moshi Porto Q 5k uphononongo lwebhetri engenazingcingo
Ungasonyusa njani isantya senethiwekhi yakho yeWiFi